The NextMapping VLOG nke Cheryl Cran gosipụtara ajụjụ ọnụ a gbara ndị ọbịa a na-akwanyere ùgwù sitere na ndị isi CEO, CIO, ndị ọkà mmụta sayensị omume, ndị ọkachamara robotic, ndị ọkachamara AI na ndị ọzọ.
Choputa uzo, uzo na ogha n’iru site n’aka ndi isi n’eche echiche banyere ihe nile metụtara odini n’oru oru.
Ngosiputa Brad Breininger, Onye Nchoputa nke Zync Agency.
Cheryl na Brad na-atụle mkpa ọ dị ịme ika n'oge nsogbu na otu esi ahọta ụdị gị.
Gee ntị ka ị nụkwuo banyere 'ọdịnihu nke ika na nke ọhụụ.'
Igosipụta Ross Thornley, CEO & Co-guzobere AQai - Ntụle Mgbanwe & Nkuzi.
Ross na Cheryl kwurịtara etu ndị mmadụ si eche echiche na imeghari mgbanwe na-eme ngwangwa ma kwadebe ha maka ọdịnihu ọrụ.
Na-egosi Marc Porat, Onye Mmekọ Onye Mere Millennial, Inc.
Marc na Cheryl na-atụle maka fim a ma ama nke ukwuu, 'General Ime Anwansi, 'teknụzụ, ịbụ mmadụ na ọdịnihu nke mmadụ.
Na-egosi Dr. Rovy Branon, Vice Provost maka Mahadum nke Washington Continueum College.
Dr. Rovy na Cheryl na-atụle ọdịnihu agụmakwụkwọ.
Featuring Ben Wright, onye isi oche nke Velocity Global.
Ben na Cheryl na-atụle otú ụlọ ọrụ nwere ike isi rụọ ọrụ ma gbasaa n'ụwa niile site na teknụzụ ha na otu esi ejikere maka ọdịnihu ọrụ.
Na-egosi Amber Mac, Onye isi ala, AmberMac Media, Inc.
Amber na Cheryl na-atụle usoro teknụzụ, mgbanwe dijitalụ, imepụta ihe ọhụrụ na ọdịnihu ọrụ.
Na-egosi Matt Barrie, CEO nke Freelancer.com & Escrow.com
Matt na Cheryl na-atụle ọdịnihu ọrụ, ọdịnihu ọrụ na freelancer - ụlọ ahịa kachasị freelancing n'ụwa, na-ejikọ ihe karịrị 30 nde ndị ọkachamara gburugburu ụwa.
Featuring CEO nke UpWork Stephane Kasriel
Cheryl Cran gbara Stephane ajụjụ banyere ihe ọ hụrụ maka ọdịnihu ọrụ yana ihe kpatara ụlọ ọrụ ji nwee ike inye aka na-emebi akụ na ụba 'onye ọchụnta ego'.
Na-egosi Sebastian Siseles Director nke Freelancer
Cheryl Cran gbara Sebastian ajụjụ banyere mmetụta nke ndị nweere onwe ya na-azụ ahịa. Ọ na-ekwupụta otu esi azụ ahịa taa kwesiri inwe ike ịnya ọrụ na-agụnye oge, oge na ndị ọrụ na-akwụghị ụgwọ.
Na-egosi Shoshana Deutschkron, VP nke Nkwukọrịta & fordị maka UpWork
Cheryl Cran gbara Shoshana ajụjụ banyere otu ndị dịpụrụ adịpụ - otu esi eme nke ọma ịbanye ma na-eduzi ọdịnihu ọrụ eziokwu nke ịba ụba ìgwè dịpụrụ adịpụ.
Featuring Hamoon Ekhtiari, CEO nke Audacious Futures
Cheryl Cran ajụjụ ọnụ Ọdịnihu Audacious Onye isi ala Hamoon Ekhtiari banyere ọdịnihu ọrụ na ihe kpatara njikọ bụ ọdịnihu.
Nweta ozi ohuru na mmelite banyere ọdịnihu ọrụ.